Meninjaịtis - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Nwatakiri nwere Meninjaịtis
Meninjaịtis bụ ọrịa nke siri ike n’emetụta ụbụrụ. Ihe n’egosi na mmadụ enwetala ya bụ ahụọkụ, isiọwụwa na olu mgbu. Ndịọzọ gụnyere isi ịgha ghara ghara, anọghị otu ebe, ịgbọ agbọ n’izere ebe nkpọtụ dị. Ọbụrụ n’oji ụmụntakịrị ọnaghị egosi ihe doro anya, mana ha n’egosi ebe ụfọdụ ụkọ n’akọ ha, ụra ịtụ ha n’erighị nri nkeọma. Ọbụrụ n’ụkọ n’akọ ha, ọ na-egosi n’oji nwatakịrị a. Dịka iheatụ, meninjaitis nke nje meningokokal kpatara nwere ike iji ọkọ abịa.
Mgbe ọgbaliri elu, ọ na-egosi n’ọbụ nje dị iche nke ọgwụ dị iche iche kpatara. Nje meninjaitis n’egbu mmadụ ogologo oge n’ihi ọ na-emetụta ụbụrụ n’ọkpụkpụ azụ. nke a n’egosi n’ọbụ ọrịa n’achọ ilebara anya mgbe niile. Iji mepee ya, a na-etinye ntụtụ n’ime ọkpụkpụ azụ ma mịpụta ihe dịka mmiri ma wega ya maka ime nnyocha. A na-eme nnyocha a site n’ebe eguzobere n’ụlọọgwụ maka ya.
Ụfodụ n’ime ha nwere ike inwe ngwọta site n’iji ọgwụ ọgbụgba dị iche iche. Inye onye nwere ya ọgwụ dị mma. Ihe mbụ ekwesirị imere onye nwere ya bụ inye ha ma ọgwụ ya na nke nsochi. Inyekwa ọgwụ nke ga-eme ka ọghara ịgbali elu dịkwa mma. Ọrịa meninjaitis nwere ike ịkpata ọrịa ndịọzọ dịka ịda ogbu, akwụkwụ n’ọrịa ụbụrụ ndịọzọ maọbụrụ n’elebaraghị anya n’oge.
N’afọ 2013, mmadụ dị nde 16 nwetara ọrịa a. Ihe nwụrụ nay a dị mmadụ puku 303 n’uwa niile nke gbadatara site n’ọnụọgụgụ dị nde 464 n’afọ 1990. N’ihi mbọ agbara ibelata ya ruo pasent 15. Mgbe oji enyekarị ndị mmadụ nsogbu bụ site na Disemba ruo Jun afọ ọbụla na mba Afrịka ebe ọ na-emekarị. Onwere ike imetụta akụkụ mba ụwa ndịozọ. Ọbụ n’asụsụ Grik ga-esi nweta aha enyere ọrịa a. Nke bụ μῆνιγξ méninx, "ụbụrụ" bụ okwu ahụike -itis, “ịgbali elu”.
Njikọ[mezie | dezie ebe o si]
↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "Bacterial Meningitis". CDC. April 1, 2014. Retrieved 5 March 2016.
↑ 9.0 9.1 "Meningococcal meningitis Fact sheet N°141". WHO. November 2015. Retrieved 5 March 2016.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Meninjaịtis&oldid=69170
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 5 Ọnwa asaa 2021, mgbe 08:21